Shina Fomba vaovao fanaovana tanky ady totohondry fanatanjahan-tena lehilahy ISAPPARELA
Akanjo ady totohondry fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy vaovao
Style: tampon'ny tanky fanaovana fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy vaovao
Azonao atao ny manampy ny volavolao amin'ireto fomba ireto ary mifanentana amin'ireo kojakoja ilainao hitondranao endrika hafa.20 + endrika vaovao isan'andro. Manantena amin'ny ISA, azonao atao ny mamorona ny volavolao ho tena mandresy ary mahazo ny tsena; Tongasoa eto amin'ny NC ISA INDUSTRY AND TRADE COMPANY. Hanome anao ny serivisy tsara indrindra izahay, vita amin'ny lamba landihazo ireto akanjo ireto, izay ahazoanao aina rehefa mitafy azy. Ny endrika aoriana dia endrika endrika I ihany koa, izay ahafahanao mampiseho tsara ny endrikao rehefa manao fanatanjahan-tena
Teo aloha: Akanjo tanky vaovao an'ny lehilahy vaovao
Manaraka: Fomba amam-panaovan'ny klioban'ny basketball
Akanjo fanatanjahan-tena fanaovana fanatanjahan-tena ...
Ny tanky ataon'ny lehilahy dia ambony ...